Hiran State - News: Wararkii ugu danbeeyey iyo safarkii Prof Waraa uu ku tagay magaalada Toronto
Wararkii ugu danbeeyey iyo safarkii Prof Waraa uu ku tagay magaalada Toronto
Canada:-Magaalada Toronto oo ah magaalada ugu weyn dalkaasi Canada marka laga hadlayo baaxada, dhaqaalaha, shacbiyada ahna magaalo udub dhaxaad u ah jaaliyada Somaliyeed ee dalkaasi Canada waxaa ku sugan oo soo gaaray habeenkii qamiista Musharaxa madaxweynimada Somaliya Professor Ahmed Muumin Warfaa oo marka xaqiiqda laga hadlo ah ninka ugu hadal heynta badan dalkaasi Canada gaar ahaan magaalada Toronto habeenkii xaleyto ahaa markad magalada u dhaadhacdo siiba meelaha ay ku badan yahiin jaaliyada Somaliyeed ee magaalada Toronto oo intooda badan magaalada ka degan dhinaca galbeed iyo bari.
Waxaa meelkasta lagu hardhay sawirka musharaxa oo si fiican looga shaqeeyey, sidoo kale xarumaha ganacsiga iyo meelaha ay jaaliyada Somaliyeed ku kala warqadaan waxaa looga hadlayey qudbadaha uu maanta ka jedin doono shir uu maanta la yeelan doono jaaliyada Somaliyeed.
Musharaxa wxaa si aan caadi aheyn habeenkii qamiista loogu soo dhaweeyey garoonka diyaradaha magaalada Toronto iyadoo ay halkaasi diyaar ugu ahayeen rag iyo dumarba. waxaa lagu soo galbiyey gaari aad u qurux badanaa amaba si kale hadaan u dhigno Marcedez Madow oo aan xitaa qofka ku jiro si sahlan loo argeyn. musharaxa waxaa loo galbiyey Hotelka Sheraton oo aan sidaa uga fogeyn garoonka diyaaradaha magaalada Toronto.Isla habeenkii xaleyto ahaa waxaa si gooyni ah casho sharaf ugu sameeyey waxgaradka beesha uu ka soo jeedo Professorka oo iyagu dhawr su,alood oo marka nuxurka laga abaaro iskugu jiray dhiiragalin iyo dar daaran halkaasi ugu soo jeediyey waxaana ka mid ahaa su,aalahoodii.
Hadaladii waxgaradkii halkaasi iskugu yimid ka dhawaajiyeen waxaa kamid ahaa.
1- Waxa laga hadlayo waa arimo Somaliyeed iyo mustaqbal wadan bur bursana mudo ka badan 21 sano halka aysanba shacabka Somaliyeed waligood helin amba aragba wax cadaalad ah oo iyaga farxad galiya sida goobta shirka laga dhawaajiyey hadane waxey yiraahdeen inagu caawa wax gooyni ah kuukuma yeerin kulankanina waa casho aanu ku gudaneyneyno waajibaadkii beelnimo ee na saarnaa maadama howsha aad u socoto ay tahay mid guud oo Somaliyeed anaguna aanu Somalidaas ka mid nahay bal kubada dhulka noo dhig ee warbixin na sii.
Professor Warfaa ayaa goobtii ka sheegay intii uu Somaliweyn u sheegayey mudadii uu safarada ku kala bixinayey Africa iyo America oo uu kula kulmayey jaaliyadaha Somaliyeed isagoon waxna ugu darin waxna ka dhimin.
2- Somalidu waxey tiraahdaa war la qabo xiiso ma leh waxa Profeesorka lagula taliyey inuu ku dadaalo cadaalada kuna dadaalo inuu dalka gaarsiiyo ilaa ay Somaliweyn dantooda gartaan oo ay isku tanaasulaan si ay u soo laabato derisnimadii, Somalinimadii, walaaltinimadii dantii guud ee shacabka Somaliyeed ka dhaxeysay oo qeyb ka mid ah fulinteeda laga doonayo iney iyagu bilaaban inta halkaasi iskugu timid ayna garsiiyaan inta ka maqan.
Intaasi kedib Professorka ayaa loo galbiyey goob ay ku sugayeen dumarka oo iyaguna si gooyni ah dadaalo kaba dheereyey raga muujiyey iyagoo si gooyni ah ula kulmay isaga oo kaliya oo aysan la socon wax rag ah,shirkii dumarka ma aheyn wax ku saabsanaa siyaasad ee waxey Professorka ugu duceeyeen in hadii hogaankiisu uu qeyr u yahay shacabka Somaliyeed oo si weyn u dhiban inuu ilaah u fududeeyo.
Intaasi kedib waxaa loo soo galbiyey Hotelkii uu ka deganaa magaalada oo ay halkaasi diyaar ugu ahaayeen aqiyar ay wayo waayo iskugudanbeysay. ahmuhiim waxaa lagu wadaa inuu maanta ka dhaco magaalda toronto shirkii ugu weynaa oo uu la yeelanayo jaaliayda Somaliyeed.
Sidii caadada aheyd hadii aad tahay muwaadin Somaliyeed si aad iskaka hubiso qofka doonaya inuu beri ku hogaamiyo hadaba Professorka waxaa kala xariiri karta.
La soco sawiro soon
Ahmed Muumin Warfaa
· admin on May 21 2011 14:12:20 · 0 Comments · 2490 Reads ·
14,569,278 unique visits